Namuhla, izinhlelo zamaphayiphi ezenziwe nge-polypropylene zithole ukusabalalisa kwazo kabanzi, ngoba zinamakhono amaningi. Kodwa ngokulungiswa nokusebenza kwabo okudingekayo okudingekayo, okubizwa ngokuthi ama-valves ebhola. Zizoxoxwa ngezansi.
I-polypropylene corner crane iphinde ibhekisele kulezi zinhlobonhlobo. Okungajwayelekile ukuthi imikhiqizo enjalo yenzelwe ukuvala amanzi. Amadivayisi asetshenziselwa izinhlelo zokushisa okushisayo nokubandayo, kanye nokushisa. Umzimba wemikhiqizo efanayo uyenziwe nge-polypropylene, ngenxa yokuthi ukufakwa kwama-cranes kwenziwa ngokusebenzisa ubuchwepheshe obufanayo obusetshenziselwa ukuxhuma amapayipi e-polypropylene nezinye izinto zokufakelwa. Isici sabo esihlukile siphumelele futhi asikho isidingo sokulungiswa nokugcinwa. Kumele kuqashelwe ukuthi leyo ndlela ayifanele isetshenziselwe ukulungisa ukujula kokugeleza kwamanzi, ngoba kuleli cala lizohluleka ngokushesha.
I-Polypropylene crane idayiswa ngezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo, kodwa ngezansi yizici ze-crane PPRS PN20. Ububanzi bokushisa kwalo okusebenzayo bungaba kusuka ku-0 kuya ku-95 ° C, kanti ububanzi bokuphakama buyi-20.63 mm. Ngokuvamile abathengi banesithakazelo kumbuzo onjalo njengesikhathi sokusebenza. Uma kuthinta ukuguqulwa okuchazwe ngenhla, kungasetshenziswa emazingeni abandayo namanzi ashisayo. Esikhathini sokuqala, impilo yensizakalo ingafinyelela eminyakeni engu-50, kodwa uma isistimu yokunikezwa kwamanzi ashisayo, izinga lokushisa lomphakathi osebenzayo akufanele libe ngaphezu kuka-75 ° C, ngenkathi ungalindela ukuphila komsebenzi kunomkhawulo eminyakeni engama-25. Kubalulekile ukucabangela ukucindezelwa okusemthethweni ohlelweni, okumele kube ngu-20 bar.
I-Polypropylene crane inezimfanelo zokuzinza kwamakhemikhali, ngakho-ke ithola ukusatshalaliswa kwayo ngaphansi kwezimo zamapayipi asekhaya kuphela, kodwa futhi nezinhlelo zezimboni, ikakhulukazi, zisetshenziselwa amapayipi angaphakathi azo ahlangene nama-acids.
Phakathi kwezinzuzo zemikhiqizo echazwe kungabonakali nje kuphela ukuqina nokuntuleka kwesidingo sokugcinwa ngesikhathi sokusebenza, kodwa futhi nezindleko eziphansi, ubukhulu bezinhlanganisela, kanye nokuqina okuhle. Noma yimuphi umsizi ngosizo lwamathuluzi alungisiwe uzokwazi ukufaka indlela enjalo, kodwa ngaphezu kwalokho kuzodingeka ukuthi ulungise umshini wokushisa. Ukukhululeka kokufakwa kungabuye kuthiwe kunenzuzo enkulu. Phakathi kwezinye izinto, idivayisi inokubukeka okukhangayo, izakhiwo zangaphakathi azifaki isikali, nesisindo saso sincane. Uma ukhetha iphepheni ye-polypropylene, kufanele uqaphele ukuthi ububanzi bayo ngaphakathi ngaphakathi kwesango kufanele buhambisane nesici esiyingqayizivele epayipi.
Izinkinga eziyinhloko zemikhiqizo ye-polypropylene
Uma ungakanqume ukuthi uthenge iphepheni ye-polypropylene, kufanele ufunde kabanzi mayelana namaminithi, kodwa awaningi. Njengoba kuphawuliwe ngenhla, le valve ayikwazi ukusetshenziselwa ukulawula ukugeleza - lesi sici ngezinye izikhathi sinokungalungi kubathengi. Phakathi kwezinye izinto, idivayisi ayikwazi ukuhlakazeka, ngakho uma ihluleka, ukuyibeka kuyisisombululo esiyinhloko kule nkinga. Nakuba kunezimo ezimbi, kodwa azikwazi ukubizwa ngokuthi yibucayi.
Amakhansela amapayipi e-polypropylene afakwe ubuchwepheshe abathile, okuhlinzekela ukuhambisana nezigaba eziningana. Eyokuqala yalezi indawo yomkhiqizo. Kumathinathi, kufanele uqinisekise ukufinyelela okujwayelekile ukuze isibambo singashintshwa ngokukhululekile. Isinyathelo esilandelayo ukukhetha imodeli. Into eyinhloko yukuthi intambo ifana, ngaphandle kwalokho kuzodingeka ihlulwe kabusha. Uma ufaka ama-polypropylene ama-cocks wokushisa, kubalulekile ukuba unake imicibisholo, ekhona engaphandle kombhede. Ziyadingeka ukuze zibonise isiqondiso sokugeleza kwamanzi.
Isinyathelo esilandelayo sizobe sishukumisa intambo enebhebhoni, ezokwenza ngcono ikhwalithi ye-seal. Ngemuva kwalokho, ithempipi ingahlungwa. Inkosi kufanele ihlole ukuze ibone ukuthi kukhona yini okumele uyike lapho uvula i-knob. I-crane ishaywa ngamandla athile, uma kungenjalo, khona-ke ungqimba olungeziwe lwe-sealant kufanele lulimazwe. Ukujikijela i-crane kumele kuhambisane nomzamo othile, kuyilapho lo tape ngokwawo luzofakwa kumalungu.
Uma ukuphela kwempompi kuwuchungechunge oluvulekile, kufanele ukuthi luboshwe nge-tape kanye neflethi kusukela kumathinathi kuya kumbhobho - lokhu kuzokuvumela ukuba ufeze ukuxhuma okukhulu kokuxhumanisa. Okulandelayo, udinga ukuhlola ukuqina, lapho uhlelo luqala khona amanzi. Uma kungekho umswakama emaqenjini, konke kuhlelekile, ungaqala ukusebenza ngokugcwele. Ungasebenzisi iziphethu zamanzi uma ufaka ama-cranes , udinga kuphela ukulungisa amapayipi.
Ukuxhumeka ngosizo lwe "American"
"Amamerica" amapayipi e-polypropylene ahlanganisa amadivaysi angahle ahlukaniswe futhi angasetshenziswa kaningi. Ukusetshenziswa okunenzuzo kwemikhiqizo enjalo ukufakwa okusheshayo ngisho nezingxenye ezinkulu kunazo zonke ezindaweni ezinzima ukufinyelela, kungekho mzamo owengeziwe ongayisebenzisa. Lokhu kusebenza futhi ekulungiseni umsebenzi ohlelweni lokusebenza.
Kunezinketho eziningi, lapho "i-American" yamapayipi e-polypropylene isetshenziswa. Phakathi kwabo:
Ubukhona bezintambo zangaphakathi;
Ubukhona be nut nut;
Inhlanganisela yezindlela okukhulunywe ngenhla, ngokulungiselelwa okuhlukile.
Ukuze uxhumano olufanayo olufakiwe, ukufakwa okudingekayo lapho kukhona intambo. Yenza ngokwakho emipayipi eyenziwe nge-polypropylene akunakwenzeka. Kulesi simo, abasizi be-sealant neTeflon tape. Uma ngaphandle kwempompo ye-polypropylene ufuna ukusebenzisa i- "American" uma uxhuma amapayipi, khona-ke esiteji sokuqala udinga ukulungisa okugcina, unqume futhi ususe i-chamfer, uma kunesidingo, futhi uma ngabe indaba iyiplastiki, udinga ukulinganisa.
Isinyathelo esilandelayo ukuxhuma ukufaneleka. Kuqiniswa yincenye eyenzelwe ukwelusa. Khona-ke olunye uhlangothi lwesikhangiso lubekwe futhi ngokuvamile luyinkambo. Inkosi kufanele iqinise ukufaneleka kokuhlola ikhwalithi yomsebenzi futhi, uma kunesidingo, ukulungisa ukungasebenzi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuvuza, khona-ke imbumbano yenyunyane kufanele iqinisekiswe ngemva kwalokho. Kubalulekile ukuhlinzeka ngobuningi ukuze kuzuzwe ukuqina okuphelele. Uma kungekho ukuthembela ku "Amamerica" noma ufuna ukuqinisekiswa kabusha, khona-ke ungaphinda uvuselele intambo ye-fuselage emcongeni wokugoba.
Izindleko ze-polypropylene cranes
I-polypropylene cranes, intengo yakhe ebhekwa njengenkululeko yentando yeningi, manje isakazeke futhi ihanjiswa ngentengo ehlukahlukene. Ngokwesibonelo, i-valve-valve, kufanele ukhokhe ama-ruble angu-295., Nakuba i-valve yebhola ibiza ama-ruble angu-369. I-polypropylene cranes yamanzi ashisayo angathengwa ngama-ruble angu-171. Kodwa i-polypropylene crane ye-20 mm ububanzi ibiza ama-ruble angu-243.
Uma kunesidingo, ungathatha i-cock yangaphakathi ye-radiator nge "American", futhi uma ububanzi bungama-20 mm, khona-ke into ngayinye kufanele ukhokhe ama-ruble angu-147. Uma ufaka izinhlelo zamaphayiphi, ngezinye izikhathi kunesidingo se-valve eqondile yebhola ephethe ibhola yomunwe. Kulesi simo, umkhiqizo uzobiza ama-ruble angu-311.
Emabhayisikili Self-eyenziwe. Indlela yokwenza ibhayisikili
Balanoposthitis wamafutha kuzosiza